Mpanamboatra sy mpamatsy fiara China Beach | Ruiyi
Ny teknolojia iraisana roa dia ahafahan'ny mpampiasa mivalona voalohany ary avy eo mihodina ny lalambe mankany amin'ny habe iray ampy hamehezana ao amin'ny toerana tery.
Fifandraisana roa ho an'ny fonosana: ny teknolojia iraisana roa dia mamela ny mpampiasa hitifitra aloha ary avy eo ahodin-dàlana mankany amin'ny habe iray ampy hamehezana amin'ny toerana tery, toy ny eo ambanin'ny ATV na ao ambadiky ny seza kamio. Ireo tavy ireo dia mamaha ny olan'ny fitehirizana ary mety amin'ny habaka izay tsy vitan'ny rampona mahazatra.
Blanking, nohitsakitsahana, miondrika, miondrika, welding, poloney, sandblasting, famafazana, fanaraha-maso, fivoriambe, fonosana, vokatra vita.
Fifandraisana roa ho an'ny fonosana: Ny teknolojia iraisana roa dia ahafahan'ny mpampiasa mivalona voalohany ary avy eo mihodina ny lalambe mankany amin'ny habe iray ampy hamehezana amin'ny toerana tery, toy ny eo ambanin'ny ATV na ao ambadiky ny seza kamio. Ireo tavy ireo dia mamaha ny olan'ny fitehirizana ary mety amin'ny habaka izay tsy vitan'ny rampona mahazatra.
Fanodinana incision: Ny fanapahana ny traction dia manome asa fampidinana mety, miantoka ny tsy fanamafisana ny fizotrana ny fandefasana sy ny famoahana entana, ary azo antoka sy azo antoka eo amin'ny tehezan-tendrombohitra ny entanao.
Ny halalin'ny fanidiana tena: mila mamelatra ny tehezan-droa mitambatra fotsiny, ny andohalambo dia afaka mihidy ho azy eo amin'ny toerana sy enta-mavesatra.
Aluminium maivana: 22 pounds fotsiny. Tsivalana tsirairay (44 lbs). Ho an'ny mpivady), ireo tehezan-tendrombohitra ireo dia vita amin'ny aliminiam-piaramanidina, manome tanjaka sy faharetana mahatalanjona nefa tsy manampy lanja.
Volavola fanangonana habaka:Ny famolavolana telo sosona dia mamonjy toerana ary mahatonga ny fitehirizana maharitra. Azo ampidirina anaty boaty fanamoriana kamiao mahazatra aza izy io, ao anatin'izany ny tahony ho mora entina.
Fametrahana azo antoka: Ny fehikibo azo amboarina azo amboarina dia miantoka fiantohana sy famoahana entana azo antoka ary miantoka ny fitaovanao soa aman-tsara ao anaty kamio.
Isa antonony CW060
fahafahana 3000LBS / 1500KG
Anaran'ny marika J.
Seranan-tsambo Seranan-tsambo Qingdao
Size 4000 * 500 * 106mm
Fonosana Fepetra takiana manokana amin'ny mpanjifa
Anaran'ny vokatra Rampan'ny aliminioma
Ny làlan'ny fiara amoron-dranomasina dia ampiasaina amin'ny fitaterana fiara tsy mataho-dalana sy fiara amoron-dranomasina. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny lampihazo ao ambadiky ny fiara fitaterana, ny fiara amoron-dranomasina dia afaka miditra mora foana amin'ny fiara fitaterana amin'ny alàlan'ny lalambe, mahatsapa ny fitaterana mora sy haingana ary ny famoahana sy ny famoahana.
Jereo ny boky torolàlana momba ny fametahana manokana
Na Mifandraisa aminay
Ny kalitaon'ny valin'ny hevitry ny mpividy dia tsara, azo ampiharina ary tsotra, mahazaka enta-mavesatra, androm-piainana lava, fivoriambe mety
Teo aloha: Fitaovana manara-penitra avo lenta
Manaraka: Trano voninkazo rakotra zaridaina zaridaina
China Concrete Mixer, Caster Wheel, Kodiarana PU, Kamio mixer, China PU Wheel, Sina PU Foam Wheel,